Nhau - Nei dzimwe imbwa dzakanyanya hyper kupfuura dzimwe?
Isu tinoona imbwa dzakatenderedza uye dzimwe dzadzo dzinoita sedzisina simba simba, nepo dzimwe dzakadzikiswa zvakanyanya. Vazhinji vabereki vechipfuwo vanokasira kudaidza imbwa yavo ine simba "kusagadzikana," Nei dzimwe imbwa dzakanyanya hyper kupfuura dzimwe?
Vafudzi veGerman, Border Collies, Golden Retrievers, Siberian Huskies, Terriers - chii chakaita imbwa idzi marudzi akafanana? Vakaberekerwa basa rakaoma. Ivo vanowanzo kuve vanesimba uye hyper.
Makore ekutanga embwanana
Imbwa diki zvakasikwa zvine simba rakawandisa uye vakuru vanogona kutonhodza nezera, asi dzimwe imbwa dzinogara nesimba muhupenyu hwavo hwese, zvinoenderana nehutano hwavo. Pakati peaya makore ekuumba, kushamwaridzana, kudzidziswa kwakaringana, uye kusimbiswa kwakanaka ndizvo zvakakosha kune yakasimba simba imbwa hupenyu hwese mumakore avo anotevera.
Zvikafu zvakachipa zvinowanzo takurwa nemidziyo isingadiwe nembwa yako, sekuzadza, zvigadzirwa, kupenda, uye shuga. Kupa imbwa dzako chikafu chakaderera-mhando kunogona kukanganisa maitiro avo, zvakanyanya sekudya chikafu chisina chikafu kunogona kuchinja manzwiro edu. Zvidzidzo zvine kuwirirana pakati pekusanyanyisa uye imwe imbwa chikafu zvinongedzo, saka zvine musoro kufudza imbwa yako mhando yepamusoro chikafu nechena.
Imbwa dzine simba dzinoda kurovedzwa uye imwe panguva imwe newe seshamwari yavo yaunofarira.Ungatambe mitambo navo.uye zvakare imbwa imbwa, rwendo rwepaki imbwa runoita kuti vamhanye vachitenderera, kushamwaridzana, uye kusakara pasina nguva.